Agasti 2018 | Londoloza Isitimela
Inyanga: Agasti 2018
Ikhaya > Agasti 2018
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Uthatha ibalazwe Europe kanye esacabanga ukuya kungaba a nightmare! Yebo, ikakhulukazi uma zonke uthola Uyi kwamasonto ambalwa. On izwekazi ahlukahlukene ngakho futhi ecebile isiko, amasonto amabili kungaba kubonakala kukufushane kakhulu! Ngakho-ke, kungcono cishe engcono…
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi Kungani senza ngihambe ngesitimela? Izincwajana zemininingwane travel eziphumulele, esisebenzayo nokunikezwa isici nomphakathi ukuthi ezinye izindlela zokuhamba nje angeke umadanise. Nokho, ukuhamba ukukhubazeka kungaba nzima kwabanye. Lokhu akusho ukuthi awukwazi ukujabulela ubumnandi, Nokho. Lesi sihloko…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Ukuhamba usuka e-Amsterdam uye eBerlin ngesitimela kunikeza umhambi okuhlangenwe nakho okungalibaleki nokukhetha okuhle kakhulu kwe-Eco. Nakuba lwamahora ayisithupha kancane kancane, induduzo olunikezwa izitimela charm uhambo ivelele. Ngokubukeka okuhle eduze kwe…